Elections en Birmanie- Propos de M. Laurent Fabius, ministre des affaires (...) - La France en Birmanie
> Actualité en France > Elections en Birmanie- Propos de M. Laurent Fabius, ministre des affaires (...)
« Je voudrais saluer l’excellente nouvelle des résultats des élections en Birmanie qui marquent une étape majeure dans la marche de ce pays vers la démocratie. Nous nous réjouissons beaucoup pour le peuple birman. »
“I want to hail the very good news of the results of the elections in Myanmar, which markamajor step in the progress of this country towards democracy. We are very happy for the people of Myanmar.”
ပါရီမြို့ရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအပြီးတွင် ထုတ်ပြန်သောMr. Laurent FABIUS - နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီး နှင့် ပါရီမြို့ရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံ ဥက္ကဌ ၏ ကြော်ငြာချက် ။ (ပါရီ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၅)
မြန်မာနိုင်ငံမှရရှိသော အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ရွေးကောက်ပွဲ အဖြေရလဒ်သတင်းများသည် ဒီမိုကရေစီ ခရီးကိုလျှောက်လှမ်းနေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ချီးကျုးဖွယ်ရာ ဖြစ်ရာ မြန်မာ ပြည်သူလူထုအတွက် ကျွန်ုပ် လွန်စွာဝမ်းမြောက်မိပါသည်။